उमेर अनुसार कुन कुन भिटामिन आबस्यक ? – Damauli Online News
उमेर अनुसार कुन कुन भिटामिन आबस्यक ?
६ बैशाख २०७९, मंगलवार ०९:४०
कामको धपेडीले थकाई लाग्नु स्वभाविक हो । तर, कहिले कहीं कुनै शारीरिक क्रिया बिना नै थकाइ लाग्छ, अल्छी लाग्छ । कुनैपनि काम गर्न जाँगर चल्दैन । यसले हाम्रो सामन्य दिनचर्या समेत प्रभावित हुन्छ ।
किन यस्तो हुन्छ त ?
सामन्यतः हाम्रो शरीरमा भिटामिन्सको कमीले गर्दा अल्छी लाग्छ, थकान महसुष हुन्छ । भिटामिन कति लिने वा यसको स्रोत के हो त ? त्यो भन्दा अघि भिटामिन के हो भन्ने कुरा जान्नु उत्तम हुन्छ ।
किन चाहिन्छ भिटामिन ?
– यो त्यस्तो पोषक तत्व हो, जसले शरीरमा मोटाबोलिज्मलाई नियमित राख्छ ।
– मूख्य भिटामिन ए, बी, सी, डी, इ र के हुन्छ ।
– भिटामिन ए, डी, इ र के शरीरमा संचित हुन्छ र आवश्यक्ता अनुसार उपयोगमा आउँछ ।
– भिटामिन बी र सी शरीरमा संचित हुँदैन, त्यसलाई दिनहुँ लिनुपर्छ ।
– स्वस्थ्य शरीरका लागि सन्तुलित भोजन लिनु अति आवश्यक छ , ताकि सबैखाले भिटामिन्स मिलोस् ।
– खासगरी महिलालाई मासिक श्राव, गर्भावस्था, बच्चा जन्माएको बेला, मेनोपोज आदिको अवस्थामा भिटामिन्स निकै आवश्यक हुन्छ ।
कुन उमेरमा कस्ता भिटामिन चाहिन्छ ?
२०-३० बर्षको उमेरमा -यस अवधीमा पढाई एवं कामको बोझ धेरै हुन्छ । त्यसैले क्याल्सियम, भिटामिन डी, भिटामिन सि, फलिक एसिडको मात्रा शरीरमा आवश्यक हुन्छ ।
३०-५० को उमेरमा – यस उमेरमा क्याल्सियम, भिटामिन डि, आइरन, भिटामिन सि, फलिक एसिड, ओमेगा ३ फ्याटी एसिड्स आवश्यक हुन्छ ।
५०-७० को उमेरमा -क्याल्सियम, भिटामिन डी, आयरन, भिटामिन बी-६ र बी -१२, ओमेका फ्याटी एसिड आवश्यक हुन्छ ।
कुन भिटामिनको स्रोत के
भिटामिन एले शरीरमा हड्डीको बृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । स्वास्थ्य हड्डी निर्माणमा यसको खास भूमिका हुन्छ । यो स्याउ, सुन्तला, आँप, खरबुजा लगायत फलफूलदेखि गाजर, फर्सी, ब्रोकाउली, अण्डा, कुखुराको मासु, माछा, सि फुड्स आदिमा पाइन्छ ।
भिटामिन बी शरीरको स्नायुलाई स्वस्थ्य राख्न, पाचन प्रणाली, मेटाबोलिज्म आदिका लागि आवश्यक हुन्छ । केरा, माछा, आलु, दुधजन्य पदार्थ आदि भिटामिन बिको राम्रो स्रोत हो ।
हाम्रो अंगको आकार बढाउन, रक्त वाहिकालाई बलियो बनाउन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि भिटामिन सी आवश्यक हुन्छ । उच्च कोलोस्टोर, उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा भिटामिन सिले सहयोगी भूमिका खेल्छ । ब्रोकाउली, पालुङ्गो, भेडे खुर्सानी, आलु, कुखुराको मासु, समुन्द्री खाना आदि यसको स्रोत हो ।
शरीरमा हड्डी बनाउनका लागि भिटामिन डी आवश्यक हुन्छ । यसले शरीरमा क्याल्सियमको स्तर नियन्त्रण गर्छ । यसको अभावमा हड्डी कमजोर हुन्छ । घामको किरण, अण्डाको पहेंलो भाग, माछाको तेल, दुध आदि भिटामिन डि को स्रोत हो ।
भिटामिन इ रगतमा रातो रक्त कोशिका बनाउनका लागि चाहिन्छ । शरीरको सबैजसो अंगलाई सामन्य रुपमा राख्नका लागि पनि यसले खास भूमिका खेल्छ । गोलभेंडा, ओलिभ आयल, सूर्यमुखी तेल, एभोकाडो, पालुङ्गो, माछा आदिमा भिटामिन इ पाइन्छ ।